Malunga nee-strudels, ii-tatenas kunye nokuzaliswa-imbali kunye neengcebiso
Ukuba ufuna ukuba nesinqe sikanomeva, yitya iapile strudel rhoqo ”- ipowusta enjalo ihombisa iteyiphu yenye yeevenkile ezidumileyo zaseViennese. Kwaye ecaleni kwayo kujinga umzobo kaSissi onobabalo - umfazi ka-Emperor wase-Austrian uFranz Joseph.
Kuthiwa eli nenekazi, elithandekayo ngandlela zonke, lalizonwabisa phantse yonke imihla strudel nge-gravy yamajikijolo ethe-ethe kwaye kwangaxeshanye yahlala incinci.
Le nyaniso inegalelo elikhulu kwinto yokuba umqulu omnandi weapile uye waba yinto entle yesikolo saseViennese kwaye wafumanisa abalandeli kungekuphela e-Austria, kodwa nangaphaya kwemida yayo.
Ababaninzi abantu abaziyo ukuba eVienna ngeentsuku zakudala le dessert ibizwa ngokuba "ihlazo" - umyeni unokukuqhawula ngokukuko ukubandakanyeka ukuba umntu wakhe onyuliweyo ubhaka istrudel esibi.
Ngoko ke, amantombazana kwakufuneka qhelisela, ukunikela ingqalelo ekhethekileyo ekulungiseleleni intlama. Kwaye oku kwakungeyondlwan 'iyanetha. Oomama abanamava baseViennese bakholelwa ukuba umaleko wentlama yestrudel kufuneka ubhitye kangangokuba umbhalo wephephandaba unokufundwa ngokulula ngawo.
Umaleko kufuneka usongelwe kwilaphu eliqatywe ngomgubo (ngoncedo lwe-napkin kunokwenzeka ukuba usonge umqulu ngokucocekileyo), kwaye ngaphambi kokuqengqa inhlama igcinwe kwioyile eshushu yemifuno.
Ukukhethwa kokuzaliswa kwe-strudel
Ubunzima obuninzi buvele ngokuzaliswa: ukukhetha iiapile "ezilungileyo" - zomelele kwaye zimnandi, isitokhwe kwiidiliya, isinamoni kunye namandongomane, kwaye ungalibali ukunambitha izithako kunye neramu kunye notywala beorenji. Kule mihla, oomolokazana bayaqhubeka nokuthatha ukulungiswa kwe-strudel ngayo yonke into enobuzaza, nangona ingakhange ithathelwe ingqalelo njengenyango "elihlazo" ixesha elide.
IStrudel esineeapile-ukukhetha ukuzaliswa
Nangona kunjalo, ukuba uthatha isigqibo sokukholisa incitshisiwe ngepayi yeapile, unokukhetha iresiphi elula. Umzekelo, bhaka taten. Ngokwentsomi yaseFrance, phantse inkulungwane enesiqingatha eyadlulayo, le khekhe yaqala yalungiswa ngabaphathi beenkonzo zeendwendwe kwidolophu yaseLamotte-Bevron kufutshane nase-Orleans, oodade uStephanie noCaroline Taten. Babeka iziqwenga zama-apile kwisikhunta, bawathululela nge-caramel isiraphu, bawagubungela ngekepusi yentlama yethenda kwaye bayibhaka ehovini. Njengoko ubona, iresiphi ayisiyonto yoqobo. Kwaye inqaku lilonke alikho kwaphela kwiresiphi, kodwa kwindlela yokukhonza.
Yinto nje ukuba oodade ngempazamo baphose ukungunda etafileni, ipayi yawa kuyo, kwaye bayiphaka i-apile izalisa. Ngezo ntsuku, olu nyango lwaluyinto engaqhelekanga: iipie zazibhakiwe zivaliwe-ukuzaliswa kwakufihliwe ngaphakathi nangaphantsi, phantsi kwentlama. Bathi ekugqibeleni uTaten "wasinda" kwindlu yabahambi kwaye wathatha iingcambu kwinkundla yasebukhosini.
Izibonelelo zeSiqhamo esomileyo ekugcwaliseni iStrudel
Ukuba uyaphinda ucinge malunga nokugcwalisa ukubhaka ipayi okanye ikeyiki ngayo, kuya kufuneka ukhumbule malunga neziqhamo ezomisiweyo. Iipilkosi ezinencasa nezomileyo ezomileyo, izihlahla zomthi ogayiweyo, iidiliya, iidiliya, amakhiwane, iiapile ezomisiweyo, iipayinapile okanye ipapaya zihlala zithathwa njengokusindisa ubomi kwabo banamazinyo amnandi. Kukwabalulekile ukuba iziqhamo ezomisiweyo ligumbi leevithamini kunye nezinto ezincinci ezinesiphumo esifanelekileyo emsebenzini wentliziyo kunye nesisu, ukuphucula inkumbulo kunye nokunika amandla umzimba.
Ukuzalisa i-strudel yeziqhamo ezomileyo
Ukongeza, nganye yazo iluncedo ngendlela yayo. Ababaninzi abantu abaziyo ukuba imihla, umzekelo, iqulethe izinto ezizodwa ezinceda ukuphelisa iintloko kunye nokubanda. I-Papaya ivuselela imetabolism kwaye yonyuse imisebenzi yesondo, amakhiwane athintela ukukhula kwezifo ze-thyroid, kwaye iivini zerayisi zityebile kwi-boron, yomeleza izicubu zethambo.
I-Prune, ii-apricot ezomileyo kunye neetsheri zihlala kwindawo ekhethekileyo kusapho lweziqhamo ezomileyo: azihlambululi umzimba kuphela, kodwa zivuselela neeseli zolusu. Uncedo olungathandabuzekiyo lweziqhamo ezomileyo kukungabikho kwemibala yokufakelwa kunye nezongezo kuzo.
Ungazikhetha njani kwaye uzigcine njani iziqhamo ezomisiweyo ze strudel
Xa ugcina iziqhamo, ungalibali ukuba azinakugcinwa kwiingxowa zeplastiki. Ukulungiselela le njongo, iingxowa zelinen okanye iingqayi zeglasi ezineziciko kufuneka zisetyenziswe. Xa ukhetha iziqhamo ezomileyo, kufuneka uqale uvavanye ukubonakala kwazo. Ukuba iziqhamo zomile kakhulu kwaye zinencasa emhlophe okanye incasa ye wayini, oku kuthetha ukuba iimeko zokomiswa nokugcinwa kwazo ziphuliwe.
Xa uthenga imihla efakwe kwiibhokisi, kuya kufuneka unike ingqalelo kwingxinano yokupakisha kunye nokufana kombala: ulusu lwesiqhamo akufuneki lushwabane. Ukugcina imihla ixesha elide kwaye ungaphulukani neempawu zabo eziluncedo, kungcono ukuyibeka kwisitya seglasi esinesiciko kwaye ugcine kwindawo epholileyo.
Ukukhetha iziqhamo ezomisiweyo zestududel
Xa ukhetha i-prunes kwimarike, khetha amajikijolo enyama anombala omnyama ngombala omncinci. Amaqunube ebala elimdaka ngebala ayedla ngokuntywiliselwa emanzini ngaphezulu kwesinye ngaphambi kokubekwa ekhawuntarini - ezo prunes zinokuba krakra okanye zibe muncu.
Rhoqo, iziqhamo ezomileyo ziphathwa ngokwenziwa okhethekileyo ukuze zingalahleki ntetho yazo kunye nencasa yoqobo. Kungenxa yoko le nto, ngaphambi kokupheka, iziqhamo kufuneka zihlanjwe kakuhle, emva koko zishiywe emanzini abilisiweyo kangangeeyure ezininzi. Kwaye iintlobo ezilula zeerasintyisi zihlamba izihlandlo ezininzi kwaye zigcinwe kubisi omuncu okanye kwi-kefir.
История | Iingcebiso | Iziqhamo ezomileyo | IStrudel
I-strudel puff pastry
Ikomityi yasekhaya enomdiliya omncinci kwi-kefir. Iresiphi
I-dessert ye-pita ekhawulezayo - i-strudel
Puff i-pastry pie ngejikijiki: iresiphi
exhonyiweyo ukutya nokuphekaephawulweyo История, Iingcebiso, Iziqhamo ezomileyo, IStrudel
Edlulileyo "Zero" cosmonauts - amalungiselelo enqwelomoya yokuqala
Okulandelayo Ukutya kuka-Osama Hamdiy yindlela elungileyo yokunciphisa umzimba
Imibuzo ye-81 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,935.